नेपाल र कोरिया बीचको सम्बन्धको चर्चा गरीरहंदा त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुको हालत कस्तो छ भने बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ l बैधानिक बाटो भएर गई अबैधानिक तरिकाको बसाईले गर्दा नेपालीहरुले नेपालीलाइ नै धरापमा पारिराखेको अवस्था छ l अबैधानिक बस्नु नेपालीहरुको रहर होइन बाध्यता हो तर बाध्यता भन्दैमा कोरिया जाने मूल बाटो नै छेकेर पालो पर्खेर र अवसर कुरेर बसेका नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई निराशा तुल्याउने प्रवृति अबैधानिक बसेका दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुबाट भइरहेको छ l यस्तो किसिमको प्रवृतिले गर्दा कसैको हित नहुने कुरा प्रष्ट रुपमा देखिन आएको छ
कृष्णलाई मणि चोरेको आरोप लागेको थियो रे, उनले चतुर्थीको चन्द्रमालाई हेर्दा। कृष्णले अनेक पुरुषार्थ गरेर आफूलाई लागेको आरोप गलत रहेछ भनेर सिद्ध गरे। त्यो बेलामा फेसबुक, इमेल, ट्विटर आदि समाजिक सञ्जाल भएको भए कृष्णले शायद यी सबै प्रयोग गर्थे र आरोप झुटो हो भनेर भन्थे होलान्। पौराणिककालमा यी सञ्जाल थिएनन्
यौन दुराचारी प्रमाणित भएन भने ?
छ कोही महावीर जसले दिलशोभाको एकोहोरो होइन, दोहोरो यौनिक संवादको टेलिफोन टेप सुनाउन सकोस् । यदि छैन भने मन नलाग्दा-नलाग्दै भन्नैपर्ने हुन्छ, हामीले यौन दुराचारको हेडलाइन बनाउन धेरै हतारो गर्‍यौं । बुधबार बिहान नागरिक दैनिकको हेडलाइन पढनेबित्तिकै म स्तब्ध भएँ । दिलशोभा श्रेष्ठमाथि यौन दुराचारको संगीन आरोप लगाइएको रहेछ । एक मन त लाग्यो, त्यो दैनिकका प्रधानसम्पादक मित्र प्रतीक प्रधानलाई फोन गरेर थप जानकारी लिउँ । कतै समाचार
चार महिनाअघि लन्डनको वेम्बले एरेनामा कन्सर्ट दिएर एउटा उपलब्धि बनाउन सफल सांगीतिक ब्यान्ड नेपथ्य शुक्रबारदेखि स्वदेशकै भ्रमणमा निस्किँदैछ। नेपालयको आयोजनामा हुन लागेको "शान्तिको लागि शिक्षा" टुर रत्ननगर चितवनबाट सुरु भई पुस १४ का दिन ललितपुर पाटनमा टुंगिनेछ। विराटचोक, दमक, लालबन्दी, तौलिहवा, गुलरिया, लमही, आँबुखैरेनी, बेनी, गगनगौडा पनि पुग्ने नेपथ्यका गायक तथा अगुवा अमृत गुरुङसँग कुराकानीः
दक्षिण कोरियाली पर्वतारोही अम होङ गील संसारका ८ हजार मिटर भन्दा अग्ला १६ हिमालहरु सफलतापूर्वक आरेहण गर्ने पहिलो ब्यक्ति हुन् । सन १९८५ बाट आरोहण यात्रा शुरु गरेर २००७ मा लक्ष्य पूरा गरेका उनलाई ‘ट्यांक अफ द हिमालयाज’ उपनामले पनि चिनिन्छ । कोरियाली संचार माध्यमहरुमा नेपालको प्रकृति, संस्कृति र जैविक विविधताको प्रचार प्रसारमा अहम भूमिका खेल्दै आएकाले नेपाल भित्रिने कोरियाली पर्यटक वृद्धिमा उनको योगदान प्रमुख मानिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशक लामो इतिहासमा पहिलो पटक भएको चुनावबाट निर्वाचित शेष घलेले संघमा राजनीतिक रंग हुन नहुने बताएका छन। अस्ट्रेलियाको धनी सूचीमा घले १ सय ७६औं स्थानमा छन्। घले मेलबर्नस्थित इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) का सञ्चालक हुन्। सात अर्बको लगानीमा घलेले नेपालमा होटेल सेराटनको साझेदारीमा पाँचतारे काठमाडौं सेराटन समेत खोल्दैछन्। अध्यक्षमा निर्वाचित भएका घलेसँग एनआरएनएको अभियान र लगानीका बारेमा गरिएको कुराकानी ।
तेन्जी शेर्पा गैर आवाशीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रय समन्वय समिति (एनआरएन) का महसचिब हुन् । सोलुखुम्बु सल्लेरीमा जन्मिएर दक्षिण कोरियाको सउल विश्वबिद्यालयबाट ईलेक्ट्रीकल ईन्जिनियरीङमा स्नात्तकोत्तर गरेका शेर्पासंग विश्वमा प्रतिष्ठित मानिने हुन्डाई ईन्जीनियरीङमा १५ बर्ष काम गरेको अनुभव छ । कोरियामा रहेर नेपालको पर्यटन प्रर्बद्धनमा र भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थानबारे रहेको भ्रम हटाउन बिशेष भूमिका निर्वाह गरेका शेर्पा हाल चमेलिया जलबिद्युत आयोजनामा प्रसारण लाइन अन्तर्गत सीनियर ब्यबस्थापक भएर काम गरि रहेका छन् । आउ
महिलाको हितका लागि महिला नै अग्रसर हुनुपर्छ
सानै उमेरदेखि सामाजिक सेवामा मन लगाउने लम्जुङकी जुनु गुरुङ हाल कोरियामा रहेको वुमन फर वुमन (महिलाका लागि महिला) नामक संस्थाकी अध्यक्ष हुन् । २०३४ सालमा जन्मिएकी जुनु गुरुङ समाजसेवाको भाव आफ्नो रगतमै बहेको र सानै उमेरमै घरायसी तथा सामाजिक वातावरणले आफूलाई समाजसेवी बन्न प्रेरित
गैर आवाशीय नेपाली संघ अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदका वर्तमान महासचिब तथा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार तेन्जी शेर्पा संग विजय थापाले लिनु भएको अन्तर्वार्ता
रवीन्द्र मिश्र काठमाडौंको बौद्धमा जन्मिए। नेपालमा अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर, पाकिस्तानबाट पत्रकारिता तथा बेलायतबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्नातकोत्तर गरे। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रारम्भ भएको उनको पत्रकारिता पाकिस्तानको
म हिम्मत हार्ने व्यक्तिमा पर्दिनँ
नेपालमा केही हुँदैन, गर्न सकिँदैन भन्नेहरूका लागि पुष्पा बस्नेत एउटा उदाहरण हुन्। सात वर्ष इमान्दार भएर काम गरेपछि उनले राष्ट्रिय- अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान मात्र खिचिनन्, लाखौं नेपालीको मत पाएर सीएनएन हिरोसमेत बनिन्। त्यही मतको बलमा अहिले उनीसँग सीएनएनले दिएको नगद अढाई करोड रुपैयाँ मात्र छैन, चर्चित सेलिब्रेटीको भन्दा बढी नाम र इज्जत छ । २८ वर्षको उमेरमै अत्यधिक ख्याति पाउने युवामा दरिएकी छन्- पुष्पा बस्नेत। २१ वर्षको उमेरमा समाजसेवामा हात हालेकी पुष्पाका धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन्। साप्ताहिकसँग पुष्पाले यसअघि बाहिर नआएका विषयमा कुरा गरिन्।
मुस्ताङका पहाडी वस्ती र चिस्यानमा लडीबुडी गर्दै, स्याउसित भकुण्डो खेल्दै हुर्किएका देवमान हिराचन गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष पदमा उठ्दा केहिले भने “यो लाटो भोटेले केहि गर्न सक्दैन ।” तर “विश्वका सबैभन्दा बाठा मानिस जापानीसित काम गर्ने हिराचन लाटो हुन्छ ?” उनले त्यसको जवाफ दिए ।
मान्छेले तपाईंका कुरा बढो चाख मानेर सुन्छन् तर सिरियस्ली लिन्छन्जस्तो लाग्छ कि हावा भन्छन् ? सिरियस्ली लिन्छन् नि । नत्र फर्कीफर्की पदमा आउ
२०३५ सालमा नेता अमृतकुमार बोहराबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका अशोक राई एमालेको उपाध्यक्ष छन्। तर अहिले उनै बोहराले अनुशासन आयोग अध्यक्षको हैसियतमा राईलाई पार्टी "अनुशासन उल्लंघन गरेको" भनी स्पष्टीकरण पत्र काटेका छन्। त्यसैले राईको चर्चा गर्माइरहेको छ र सँगै उनले नेतृत्व गर्ने भनिएको नयाँ दलको पनि। राजधानीको बुद्धनगरस्थित
प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले सहमतिक लागि जुनसुकै योगदान दिन तयार छु, भन्दै राजीनामाको संकेत दिएका छन्। प्रधान सम्पादक किशोर नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, सहमतिका लागि मैले जुनसुकै हिसाबको योगदान दिन पनि म तयार छु भनेर मैले पहिला पनि भनेको हो र अहिले पनि भन्छु। अन्तर्वार्ताको पूर्ण पाठ
नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ३० वैशाख आत्महत्याका घटना डरलाग्दो रूपमा बढेका छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दैनिक देशभर विविध कारणले कम्तीमा ११ नेपालीले आत्महत्या गर्छन् । यो दर हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । प्रहरीको तथ्यांकमा ०६८ को एक वर्षमा तीन हजार नौ सय २६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । एक महिनामा तीन सय २७ र एक दिनमा करिब ११ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यो संख्या ०६७ को भन्दा ६ प्रतिशतले बढी हो । देशमा आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ
रेखा थापा बदनाम छिन्, त्यसैले हिट पनि छिन्। छोटो पहिरन लगाउँछिन्, त्यसैले उनलाई व्यङ्ग्यकारहरू देखा थापा भन्छन्। धेरैपटक चर्चित हिरोलाई उनले चलचित्रबाट निकालेर आफ्नो बाहुबल देखाइसकेकी छिन्। कहिले प्रचण्डसँग नाचेर, कहिले धार्मिक आस्थामा खलल पुग्ने गरी बस्त्र लगाएर रेखाले परम्परावादीहरुलाई झड्का दिइसकेकी छिन्।
विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लार्स एच थनेलले नेपाल भ्रमण गरे । भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायत उच्च अधिकारीलाई भेटेका थनेलले नेपालमा लगानी ६ गुणासम्म बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए । पहिलोपटक भएको समूहको निजी क्षेत्र हेर्ने संयन्त्र आइएफसीका प्रमुखसँग कान्तिपुरका गोकर्ण अवस्थीले गरेको कुराकानी
अध्यक्षले पो ठेगान लगाइसक्नु भयो
एमाओवादी नेता एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण अहिले चर्चामा हुनुहुन्छ । मुलुक एकातिर गइरहेको बेलामा किरण आफ्नै पारामा "सिद्धान्त र क्रान्तिको झण्डालाई रक्षा गर्न" सङ्घर्षमा ओर्लनुभएको छ । देशभक्त, वामपन्थीहरूको संयुक्त मोर्चा बनाउन आवश्यक रहेको ठान्ने किरण आफ्नो पार्टी नेतृत्व आत्मसमर्पणवादी भएकोमा रुष्ट हुनुहुन्छ । सिद्धान्त र विचारमा लेनदेन नस्वीकार्ने किरण हाल अलिकता नरम देखिनुहुन्छ तर उच्च क्रान्तिकारी धारा र आत्मसमर्पणवादी
नागरिकताका बारेमा केही चर्चित व्यक्तिहरूबाट एउटा संयुक्त विज्ञप्तिजस्तो बहस भनिएको अपिल कान्तिपुर दैनिकमा मंसिर २ को अंकमा प्रकाशन भएको देखियो । उक्त अपिलमा मूलतः संविधानसभाको उच्चस्तरीय कार्यदलले नागरिकताका विषयमा प्रस्ताव गरेको प्रावधानका बारेमा विश्लेषण गरेर त्यो मानवअधिकार विरोधीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसित मेल नखाने
विगत लामो समयदेखि नेपालको संबैधानिक कानूनको वकालत गर्दै आइरहनु भएका संविधानविद डा. दिनेश त्रिपाठी संविधान सभाका विभिन्न निकायमा रहेर नयाँ संविधान निर्माण प्रकृयामा समेत काम गरिरहनु भएको छ । लोकतान्त्रिक संविधानका लागि स्वदेश र विदेशमा समेत वकालत गर्दै आइरहनु भएका डा. त्रिपाठी लोकतान्त्रिक संविधान बन्नु पर्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । कानूनी क्षेत्रमा झण्डै २० वर्ष व्यतित गरिसक्नु भएका डा त्रिपाठी साउथ एशियन्स फोर ह्यूमन राइटसको पनि कार्यकारी
कोरियाको समाज जिवान्त समाज हो । यस समाजमा क्षेत्रिय , जातिय , राजनैकि बिचारलाई थाति राखी फराकिलो तरिकाले सबै जना आउने हो भने उदारणिय काम गर्न सकिन्छ भन्ने सबैमा अनुरोध गर्न चाहान्छु
ज्यामरुङ-९, धादिङमा १९८३ मा जन्मेका उनले धादिङबाटै माध्यामिक स्तरको शिक्षा हासिल गरेका थिए । सन् २००३ मा दक्षिण कोरियाली भूमिमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पहिलो पटक पाईला टेकेका थिए । दक्षिण कोरियाको नम्बर १ युनिभर्सिटी मानिने सउल नेशनल युनिभर्सिटीबाट उनले क्रमश अन्डर ग्रेजुएट र मास्टर्सको अध्ययन पूरा गर्दै हाल Epidemiology (महामारी बिज्ञान) बिषयमा P.hD. गरिरहेका उनले सन् २०१० मा कोरियाको शिक्षा मन्त्रालयबाट मानार्थ शिक्षादूतको उपाधी समेत पाएका थिए।
सबैको लागि समान EDUCATION , बिस्व सान्ति र वाताबरण जोगाऊ भन्ने नारा लिएर बि.स. २०५९ बैसाख १ गते बाट मेरो बिस्व साइकल यात्रा सुरु हुन्छ | त्यति बेला म नबौ क्लास को छात्र थिए | राजधानीको एक बिध्यालयमा अध्यन गर्न जाने क्रम मा डेरा बाट बिद्यालय जादा सडक पेटीमा ससाना बालबालिका हरु ले बाच्न का लागि खाना र ज्ञान का लागि स्कुल भनेर भन्ने गरेको आवाज मैले दिन प्रतिदिन सुन्ने देखने गर्थे | तेस्तो देखे पछि मैले EDUCATION बिना जिबन अधुरो रहेछ भन्ने ठानेर मैले बिस्व भरी पुगेर सबैको लागी समान EDUCATION , बिस्व सान्ति , र वाताबरण जोगाऊ भन्ने सन्देस छर्न मैले यात्रा सुरु गरे | तेस बेला मसग गोजी मा २५ रुपया मात्र थियो | म काठमाडौँ बाट घर परिवार लाइ
प्रायः विदेशी नेपाली सौन्दर्यमा रम्न आउँछन् । घुम्छन्, फर्किन्छन् र बिर्सन्छन् । कोरियाकी यु जङ ईमा यो लागू हुँदैन । उनी नेपाली संस्कृति आत्मसात् गर्न आउँछिन् । 'पूर्वजन्ममा नेपाली राजकुमारी थिएँ कि ?' हालै अनामनगरस्थित कवि कृष्ण प्रसाईंको निवासमा कोरियाली कवयित्री यु जङ ईले भनिन्, 'त्यसैले यति धेरै माया लागेको होला ।'
प्रतिभा परिचय - यादव श्रेष्ठ
नेपालबाट टाढा प्रवासी भूमि घर बाट टाढाको विरक्त एक्लो जीवन र लामो समयको मजदूरी जीवन । रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरियामा आएका नॆपाली मजदूरहरुको बाहिरी अनुहारलाई औसतमा यसरीनै वर्णन गरे हुन्छ । तर अलिकति समय निकालेर उनीहरुसँग भलाकुसारी गर्ने हो भने थाहा हुन्छ । उनीहरुको भित्री अनुहार भने प्रवासिए पनि आफ्‍नो देशको माया ,प्रतिकुलनै भए पनि आफ्‍नो लक्ष र त्यो प्राप्तिको लागि निरन्तर साधनारत एउटा छवि हो ।
नेपालमा केही हुँदैन भन्नेहरूले मलाई भेटून्
धुलिखेलको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका वरिष्ठ सर्जन रामकण्ठ माकजु नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामान्य चासो राख्नेका लागि पनि आदरणीय नाम हो । १६ वर्षअघि अष्ट्रियाको अन्तर्राष्ट्रिय फोराल्वर्ग सिटी अस्पतालमा सर्जनको आकर्षक पद र आम्दानी छाडेर नेपाल फर्किएका रामकण्ठले आफ्नो थाकथलोमा विश्व स्वास्थ्य
अहिले तेस्रो एल्वमको तयारी गर्दैछु साथै कार्यक्रमहरुमा पनि व्यस्त हुँदै आएको छु । यी बाहेक स्कुलमा पनि पढाउँने गरेकी छु । मंसिरको पहिलो साता एल्वम ल्याउने सोच थियो तर काम गर्दै जाँदा भ्याएन मंसिरको अन्तिमतिरचाहीँ पक्कै ल्याउँछु ।
नवौंपटकसम्म चुनाव हुँदा पनि संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्न सकेको छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मैदान छाडेपछि कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल एक्लो प्रतिस्पर्धामा छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि भनेर माओवादी-एमालेबीच भएको सहमतिमा कांग्रेसले 'शंका' गरेपछि सहमति झन् बिथोलिएको छ । करिब एक महिना लामो क्यारिबियन, अमेरिका युरोप र दक्षिण कोरिया भ्रमणमा जानुअघि एमाले नेता केपी शर्मा ओलीसँग यही सेरोफेरोमा शनिबार कान्तिपुरका गोपाल खनाल र दुर्गा खनालले गरेको संवादः
नेपालको सन्दर्भमा कर्ण शाक्य बिरलै भेटिने प्रतिभा हुन्। बाबु-बाजेको परम्परागत सुन-चाँदी व्यवसायबाट मनग्गे आम्दानी भए पनि उनले ४ सय २० रुपैयाँ प्राप्त हुने वन अधिकृतको सरकारी जागिर खाएर करियर प्रारम्भ गरेका थिए। ५ वर्ष वन अधिकृतका रूपमा देशका जंगल चहार्दा-चहार्दै उनको जीवनमा परिवर्तन आयो। नेपालको ठूलो सम्पत्ति भनेको प्रकृति हो भन्ने कुरा बुझेपछि उनले यसैलाई व्यवसाय बनाउने निर्णय गरेर पर्यटन क्षेत्रमा हात हाले। चितवनको
यो एउटा त्यस्तै बकवास हो, जसरी माकुने र केही उनका सहयोगी अखबारहरूले भक्तमान अपहरणकान्डमा गरेका थिए । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा संकीर्ण स्वार्थका खातिर झूटो बोल्ने गलत संस्कार अचेल फस्टाउँदै गइरहेको छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै कैयौँ अपराधीले कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । खासगरी माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि सेना र राजनीतिक दलका नेताद्वारा अपराधीले गरेका कार्यलाई 'माओवादीले गरेको' ठोकुवा गर्दै भ्रमपूर्ण समाचार
अपहरणमुक्त भए लगतै डा.भक्तमानसँग कुराकानी
चितवन अस्पतालबाट अप्रेसन सकेर हाकिमचोकमा नजिकै आएको थिएँ । त्यतिवेला रातिको साढे १० भएको थियो होला । दुईवटा काला रंगका गाडी र मोटरसाइकल मेरो कारअगाडि आएर रोकिए । अनि तल ओर्लेर किन गाडी ठोक्काएको भनी उल्टै हपारे । मैले मेरो गल्ती होइन भनेँ । त्यसपछि एक्कासि चारजना मानिस मेरो गाडीमा चढे र आँखामा कालोपट्टी बाँधे ।
काठमाडौं महाराजगन्जका युवा व्यवसायी ३३ बषिर्य सम्राट् दाहालसँग बिहे हुने खबर अघिल्लो साता सार्वजनिक हुँदा नायिका मनीषा कोइराला दक्षिण भारतीय राज्य केरलामा तमिल फिल्मको सुटिङमा व्यस्त थिइन् ।गत मंगलबार मुम्बई हँदै काठमाडौं आएकी ३९ मनीषा नायिका यति बेला बिहेको तयारीमा छिन् ।
काठमाडौं महाराजगंज निवासी ३३ बर्षीय सम्राट र ४० बर्षीया बलिउड नायिका मनिषा कोइरालाबीच विवाहको लगनगाँठो कसिने खबरले दुवै चर्चामा छन् । मनिषासंगको सम्बन्ध र उनको व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक जीवनका बारे ईकान्तिपुरका सुरज कुँवर र बेनुप भट्टराईले सम्राट दाहाल संग गरेको कुराकानीः
केन्द्रीय समितिको बैठकमा कुटाकुट नै भएछ नि ? - लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस्ता कुरा सामान्य हुन् । विषयगत छलफल भइरहेको छ । अतिरिाजत तरिकाले साचारमाध्यममा आएजत्ति घटना हाम्रो पार्टीमा भएको छैन । के भएको हो ? - महाधिवेशन आयोजना गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको हो । साथीहरुले छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्छ भनिरहेका छन् ।